The akasununguka paIndaneti basa. Dzemaitirwe bhuku wetsime, ivo cylindrical makomba
Dzemaitirwe bhuku yetsime
mufanidzo Dzose 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6
Tsanangurai encombrements vari mamita
pamusoro dhayamita D1
Bottom dhayamita D2
Kukarukureta Vhoriyamu tsime mugomba kana cylindrical chimiro
D1 - Upper dhayamita matsime
D2 - ari dhayamita wetsime pasi
H - udzamu
Uyezve, unogona kutaridzwa mari kuchera matsime uye ivhu kubviswa mutengo.
Kune zvitatu mvura dzakatumirwa mudzimba. Zvinokwanisika vanochera tsime pachavo, unogona kuzoripa nyanzvi kuti chinangwa ichi, asi unogona akachera tsime iri nzvimbo yaro. Nzira dzose vane zvakanakira nekuipira. Vanhu vakawanda vanoda kuronga tsime riri nzvimbo, sezvo zviri chisingakoshi, unogona kuishandisa kwemakore anopfuura 50 uye kuchenesa kuvaka ichi nyore zvikuru kupfuura tsime. Kunze kuchera matsime haatarisiri rinokosha mvumo. Zvisinei, kuchera tsime uri panzvimbo, vamwe Masvomhu yavaizofanoshandisa zvakakodzera. Pano uchabatsira purogiramu yedu kukarukureta. All unofanira kuita kupinda muminda wetsime udzamu, ayo kumusoro uye nechepasi dhayamita uye mari kuchera kwaunogara rakakodzera, ipapo chirongwa kuchaita ngaaverenge Vhoriyamu tsime uye zvinofungidzirwa achikanganisa muchipindura ake.
Chokutanga mune vakazvimirira muchipindura matsime ndiyo kusarudza nzvimbo pake. Zvakakosha kuvhara mukati imwe nharaunda 50 metres pakanga pasina kuchengetera mupfudze nezvimwe netsvina kuti sei mvura yepamusoro. Hazvina zvakafanira kuronga tsime pedyo kupfuura 5 metres kubva paimba. Zvikasadaro pane ngozi kuvadza nheyo dzeimba nokuda ivhu leaching.
Zvinokoshawo kuziva kudzama wetsime. Nokuti udzamu ichi chinogona kuwanika zvivako zvakafanana pedyo nzvimbo, kana rwakavapo akachera gomba.
Cherechedza kuti haugoni akachera tsime chero nguva yegore. Zvinonzi zvakanakisisa wakanyatsokodzera ichi nguva kubva June kusvika September. Panguva iyi, aquifer yakaderera, izvo zvinoreva kuti iwe kupinda kukanganisa kubva okumusoro akaturikidzana mvura kuti ugare pashure yechirimo nemafashamo.
Chinhu chinotevera unofanira kunetseka, ichi ndiwo sei iwe Huchawedzera wetsime rusvingo. Pano pane dzakawanda kusarudza. Izvi mumatanda, monolithic kongiri uye zvidhina. Mumwe nomumwe nzira idzi Kusimbaradza zvimwe zvakwakanakira. Somuenzaniso, yakachipa mumatanda. Asi kuita kudaro ndiye pfupi-akararama. izwi rake basa isingadariki makore 15. Mukuwedzera, inofanira kucheneswa ose gore kubva sludge. Uyewo panguva muchipindura tsime asingadi kusimbisa pamadziro, iyo hunokonzera mukana pokuwa enyika.
Monolithic kongiri zvakanaka kuti inosiya dzinongobuda mvura kupinda patsime. Asi tsime yakadaro kuita kwenguva yakareba, uye zvichaita mutengo zvakati anodhura. Pano une mbiri zvokusarudza. Itai bhavhu siyana kusimbisa masvingo pachako kana kutenga kwavari. Usati wasarudza kuti zvinhu zvofambiswa sei, tapota cherechedza kuti fekitari pamusoro zvakasimbisa kongiri mhete hwakasimba kupfuura avo kuti iwe unogona kuita pachako. Asi, chokwadi, uye ivo vachava mari yakawanda.
Kuvakwa yetsime zvidhina zvinoda unyanzvi uye chinoramba kurovedzwa. Walls vanofanira yanyatsosimba, uye chidhinha kuvaka hwaro. Asi, kufanana kongiri, zvidhina havabvumiri infiltration kupinda tsime pamusoro mvura.
Kamwe tsime wakagadzirira
Chero mhando tsime mudziyo yaunosarudza, nguva nenguva rinofanira disinfected. Cleaning ngazviitwe kanenge kaviri pagore uye kakawanda kana tsime kuwira chero zvinhu dzavatorwa. Rokuchenesa tsime kubva chinoitwa pumped nokuda pombi mvura. Zvadaro, toburuka, tinoita anodiwa kurapwa zvesangano. Apo zvinhu vatorwa, silt, jecha uye tsvina kubviswa pasi uye madziro tsime, kubereka disinfection. Kuti vaite izvi, masvingo tsime uchishandisa mutsvairo kana mumakwenzi ane refu kurara mwaya dhibi.
Kana tsime rizere nemvura zvakare, uyewo zvinofanira kuwedzera dhibi mushonga mune mari 150 MG pa 1 fő mvura. Water vakamutsira zvakanaka, akazadza muvharo, zvichachengetwawo kwemaawa maviri. Mvura yakanga zvino pumped shure akandoshamba zvakanaka nemvura yakachena. The nzira inodzokororwa kusvikira kuiisa chlorine kwakanaka nokukasika.